स्वास्थ्यकर्मी माथि दुर्व्यवहार होइन हौसला प्रदान गरौ
२०७७ जेठ २८ बुधबार
देव अस्पताल भरतपुर, चितवन
कोरोना भाइरसको माहामारी फैलनु भन्दा अघिको समाजमा स्वास्थ्यकर्मीलाई गरिने सम्मान, व्यवहार, हेरिने दृष्टिकोण र माहामारी विकराल रुपमा बस्तिमा फैलिए पछि स्वास्थ्यकर्मीलाई समाजले गर्ने व्यवहार र हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक भएको छ । देशका विभिन्न ठाउँमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी माथी दुव्र्यवहार भएको पाईन्छ । कतै समाजमा बहिस्कार गरेको पाईन्छ । कोरोेना सर्छ भनेर कोठा भाडामा बसेका स्वास्थ्यकर्मीलाई भाडामा बस्न नदिएका घटना पनि आए त कतै कोरोना लिएर आएको भन्दै कुटपिट पनि गरियो ।
माहामारी फैलिनु भन्दा अघिको त्यहि समाज हो म घरदेखि सेतोकोट लिएर बाहिर निस्किदा समाजका सम्पूर्ण व्यक्तिले सम्मान गर्नु हुन्थ्यो । म समाजको लागि औषधीको छाहारि थिए । एउटा आशाको किरण थिए । समाजका कोही कसैलाई केहि स्वास्थ्य समस्या देखियो भने उपचारको लागि म हरपल तयार हुन्थ्ये । सेवा गर्न पाउँदा खुसी लाग्थ्यो । आफू स्वास्थ्यकर्मी भएकोमा गर्व लागथ्यो । समाजका सबैजनाले कुन अस्पतालमा काम गछौं, कुन विभाग हो भनेर प्रश्न गर्नु हुन्थ्यो । म गर्वका साथ आफूले काम गर्ने अस्पताल र विभागको बारेमा भनि दिन्थें । धेरैले प्रशंसा गर्नु हुन्थ्यो । आफ्ना केटाकेटीलाई म जस्तै समाजको सेवा गर्ने व्यक्ति हुनु पर्छ भनेर हौसला दिन्थे । समाजमा म एक हौसलाको पात्र थिए । माहामारी फैलिनु भन्दा अघिको त्यही मलाई सम्मान गर्ने, हौसलाको स्रोत बनाउने समाज माहामारी फैलि सकेपछि मेरो शत्रु भएर निस्किएको छ । आज त्यही समाज त्यी नै व्यक्तिहरु घरदेखि सेतोकोट लिएर बाहिर निस्किदा घृणाको रुपले हेर्छ । कोरोना भाइरस लिएर आएको एक साधनको हिसाबले व्यवहार गर्छ । छिछि, दुर दुरको व्यवहार गर्छ ।
स्वास्थ्यकर्मी हाम्रो जीवन दाता हुन् भन्ने समाज आज स्वास्थ्यकर्मीले माहामारी फैलाउछ भन्दै छ । स्वास्थ्यकर्मीले कोरोना सार्छ भन्ने मानसिकता भएकालाई यति कुराको ज्ञान त हुनुपर्ने हो कि कोरोना लागेको व्यक्तिको उपचार स्वास्थ्यकर्मीले नै गछर्न् । दिनरात अस्पतालमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीलाई कसरी लाग्यो त कोरोना ? विना स्वास्थ्य सामाग्री उपचार गर्नु परेकोले सर्यो । जोखिम त स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई हुन्छ नि जो विना हतियार माहामारी सँग लडिरहेको छ । कहिले बुझ्ने यो कुरा मेरो समाजले । समाजका मान्छे आधुनिकतामा गई सके, सोचाइमा परिवर्तन आएको छ भन्नु एउटा भ्रम मात्र हो रहेछ भन्ने कुराको पुष्टि भएको छ ।
देश र समाजको लागि भनेर आफ्नो ज्यान हतियारमा राखेर माहामारीको सामना गरिरहेको स्वास्थ्यकर्मी माथि गालिगलौज, अभ्रद्र व्यवहार कामको अन्त्य गरौ । सरकारले गरेको लकडाउनको पालना गरि स्वास्थ्यकर्मीलाई हौसला साथै सहयोग गरौ । दुव्र्यवहार गरेर स्वास्थ्यकर्मीहरुको काम गर्ने मनोबल न घटाइ दिनु । बरु काम गर्ने मनोबल प्रदान गर्नुस् । यदि मनोबल दिनसक्नु हुन भने मनोबल गिराउने काम पनि नगर्नुस् । एकपल्ट विचार गर्नुस् त माहामारी आगो सरि बस्तिमा फैलियो त्यो बेला कसले गर्छ नियन्त्रण गर्ने काम । कुनै नेता, मन्त्री, शिक्षक, सुरक्षाकर्मी आएर त हुदैन होला नि ? समाजको अपमानले स्वास्थ्यकर्मीहरु घरैमा बसिदिए भने सम्पूर्ण समाजका व्यक्तिको स्वास्थ्यको अवस्था के हुन्छ ? समाजको दुव्र्यवहार कतै नकारात्मक परिमाण पो भोग्नु पर्ने हो कि ? बेलैमा विचार गरौ ।